Mobile App ရေးဆွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှု (Android/ IOS) - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Home » Mobile App ရေးဆွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှု (Android/ iOS)
ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်သူတွေ အလွယ်တကူ နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ ကိုယ်ပိုင် Mobile App ပါပဲ။
ကောင်းမွန်တဲ့ Mobile App တစ်ခုဟာ အသစ်ရလာတဲ့ ဝယ်သူတွေကို အမြဲတမ်းအားပေးမယ့် ဖောက်သည်တွေဖြစ်လာစေတဲ့အပြင် အချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲ ထုတ်ကုန် နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကို သိစေ၊ ဝယ်စေနိုင်တာကြောင့် ရောင်းအားလည်း ပိုတိုးစေပါတယ်။
မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာမှာဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် Android App နှင့် iOS App များ ရေးဆွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ Android နှင့် iOS နှစ်ခုစလုံးအတွက် ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန် နဲ့ ငွေကုန် ကျမှု သက်သာစေပြီး App ကောင်းကောင်းရဖို့ အာမခံပါတယ်။
လုပ်ငန်းအတွက် Mobile App တစ်ခု ဘာကြောင့် ရှိထားသင့်သလဲ?
၁။ လုပ်ငန်းပေါ် ယုံကြည်မှုတိုးပြီး အထင်ကြီးစေခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းတော်တော်များများက Mobile App မရှိထားပါဘူး။ နည်းပညာနဲ့ မရင်းနှီးကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်သလို၊ စရိတ် မသုံးစွဲနိုင်တာကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ Mobile App ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ ဝယ်သူတွေရဲ့အမြင်မှာ မိမိလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်၊ တိုးတက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ အလိုလိုမြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဝယ်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုပို ရလာစေမှာဖြစ်သလို ရောင်းအားလည်း ပိုတိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အမှန်တစ်ကယ် အောင်မြင်၊ တိုးတက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ကို ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်  Branding တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သုံးစွဲသူက ကိုယ့်ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မြန် မှတ်မိစေပါတယ်။ မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာမှ ရေးဆွဲပေးတဲ့ Mobile App များဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိ၊ လှပသေသပ်တာကြောင့် လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းကို ထင်ဟပ်စေသော Mobile App ကောင်းတစ်ခု ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သုံးရလွယ်ခြင်းကြောင့် စားသုံးသူတိုးပြီး ရောင်းအားတက်စေခြင်း
လူတော်တော်များများက Computer ၊ Laptop တွေရှေ့ အချိန်တိုင်းမရှိနိုင်ပေမယ့် Mobile Phone ကတော့ အချိန်တော်တော်များများ လက်ထဲမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mobile Phone က Computer ၊ Laptop တွေထက် လူကြီးလူငယ်မရွေး ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Mobile App တစ်ခု ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ ပိုမိုများပြားလာစေပြီး ပုံမှန်ထက်ရောင်းအား တက်စေပါတယ်။ မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာမှ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Mobile App များဟာ သုံးစွဲသူ လူကြီးလူငယ် မရွေး လွယ်ကူ စွာနဲ့ အခက်အခဲမရှိ သုံးလို့ အဆင်ပြေစေတဲ့ အပြင် အင်တာနက် ဒေတာ အများကြီး သုံးစွဲစရာမလိုပဲ သုံးလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
၃။ ပြိုင်ဘက်များနဲ့ ယှဉ်လာတိုင်း ခြေတစ်လှမ်း အမြဲရှေ့ရောက်နေခြင်း
အပေါ်က အချက်တွေ မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း Mobile App တစ်ခု ရှိခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းကို ယုံကြည်မှု၊ အထင်ကြီးမှု တိုးလာစေပြီး ရောင်းအားလည်း ပိုကောင်းလာစေတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်များနဲ့ ယှဥ်လာတိုင်း လူကြီးမင်းရဲ့လုပ်ငန်းဟာ ခြေတစ်လှမ်း အမြဲရှေ့ရောက်နေမှာပါ။
Mobile App တစ်ခုပြုလုပ်ပါက ပါဝင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့
1. Mobile App အတွက် ဆွေးနွေးပေးခြင်း (Consulting)
2. Mobile App ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲပေးခြင်း (UI Designing)
3. Mobile App ရေးသာခြင်း (Coding)
4. Quality Assurance နှင့် Testing ပြုလုပ်ခြင်း
5. Google Play Store နှင့် App Store များတွင် တင်ပေးခြင်း (Launching) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာမှ ပြုလုပ်ပေးထားသော Mobile App များ
18mileForest App ကို Android ရော iOS မှာရော သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ App ရဲ့ ဒီဇိုင်းကိုတော့ သင်္ကန်းအရောင်သုံး ထားပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေး ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ရှုပ်မနေဘဲ ရှင်းလင်းသေသပ်သည့် ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
App သုံးတဲ့အခါ ပိုမိုလွယ်ကူအောင် တရားစာအုပ်၊ တရားတော်များ၊ ဓါတ်ပုံများဆိုပြီး menu ခွဲထားပေးပါတယ်။ တရားတော်များကိုလည်း category အလိုက်ခွဲထားပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရားနာသူများအဆင်ပြေရန်အတွက် ဖုန်း screen ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း ဖွင့်ထားတဲ့ တရားတော် ရပ်မသွားအောင် ဆက်နားထောင်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တရားတော် ကို လိုအပ်သလို အနှေးအမြန် နဲ့ နားထောင်လိုတဲ့နေရာကို အမြန်ကျော်ပြီး နားထောင်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
တရားတော်များ နှင့် တရားစာအုပ်များကို ချက်ချင်းဖွင့်ပြီး နားထောင်၊ ဖတ်ရှုလို့ရသလို နောက်မှ အင်တာနက် မရှိတဲ့အချိန် နားထောင်ရန်အတွက် App ထဲမှာပဲ download လုပ်ထားလို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဖတ်လက်စ တရားစာအုပ်၏ စာမျက်နှာကိုလည်း အလွယ်တကူ ကျော်ဖတ်လို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Yuzanar Land App ကတော့ အိမ်ခြံမြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား လုပ်ငန်းအတွက် App တစ်ခုဖြစ်ပြီး Theme အရောင်ကို brand အရောင်ဖြစ်တဲ့ ရွှေရောင်လေးနဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Yuzanar Land App ကို Android ရော iOS မှာရော သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ App ရဲ့ အားသာချက် ‌တွေကတော့
App ဟာ သုံးရလွယ်ပြီး အလွန်ပေါ့ပါးတာကြောင့် အိမ်ခြံမြေ ရှာသူများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး loading အကြာကြီး စောင့်စရာမလိုပဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လိုချင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေကို ရှာဖွေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ ရှာရာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမျိုးအစား၊ ပြည်နယ် နှင့် မြို့နယ် အလိုက် ရှာနိုင်ပြီး အရောင်း ၊ အဝယ်၊ အငှားဆိုပြီး အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိ အသုံးပြုလိုသည့် ငွေပမာဏ အလိုက် ကိုက်ညီတဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေကို ရှာလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
မိမိ နှစ်သက်တဲ့ အိမ်ခြံမြေကို လည်း Favorite လုပ်ထားတဲ့ စနစ်ပါဝင်ပြီး နောင်တစ်ချိန် ပြန်ကြည့်လိုတဲ့အခါ ပြန်ရှာနေစရာမလိုပဲ Favorite List ထဲမှာ အလွယ်တကူ ပြန်ကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ အမှတ်စဥ် နဲ့လည်း အလွယ်တကူ ရှာလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အိမ်ခြံမြေကို တစ်ခါတည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မယ့် contact form ထည့်သွင်းပေးထား ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေလ်းတွေပါ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြထားတာကြောင့် ရောင်းသူဝယ်သူ မြန်မြန်အလုပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အိမ်ခြံမြေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတရစရာ ဆောင်းပါးများကို အမျိုးအစားလိုက် ခွဲထားပေးတာကြောင့် အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
App ထဲမှာပဲ အိမ်ခြံမြေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ရှင်းပြထားတဲ့ video တွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Login / Sign Up လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပြီး အကောင့်ဖွင့်ပြီး App ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးပါက မိမိ ကိုယ်တိုင် ရောင်းလို / ငှားလို သော အိမ်ခြံမြေ အသစ်စာရင်းကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အလွယ်တကူ တင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသေးစိတ်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဖတ်ရလွယ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။